Maitiro ekusimudzira yako eCommerce nemaitiro ekufananidza? | ECommerce nhau
Maitiro ekusimudzira yako eCommerce nemaitiro ekufananidza?
Tisati tasvika pamhedzisiro nezvekushandiswa kwesisitimu ino mukutengeserana kwemagetsi, isu tinofanirwa kuziva kuti chii chaizvo chinomiririra.. Zvakanaka, inzira yakarongeka uye inoenderera yekutarisa zvigadzirwa, masevhisi nemaitiro ebasa emasangano anozivikanwa senzira dzakanakisa, avo vanokwikwidza vakaomarara. Ndokureva, uye sekupfupisa kuti iwe unzwisise zvirinani, iko kushandiswa kwemaitiro akakosha kwazvo ekuzadzisa zvinangwa, mune iyi nyaya muzvitoro zviripo.
Mazhinji mabviro ebenchmarking mubhizinesi chikamu anozivikanwa, kubva kwakasiyana maonero nekuenderana nezvinodiwa chaicho. Asi chikamu chakakura chevashandisi vasingazive ndechekuti kubatsira kweiyi nzira yakakosha yekuvandudza kukwikwidza kwebhizinesi rako redhijitari.
Uku ndiko kuitiswa kwayo kuburikidza nehurongwa hwebasa iri iwe unenge uchikwanisa kuwedzera kutengeswa kwezvigadzirwa zvako kana masevhisi kana kutopa webhusaiti yako kutaridzika kukuru. Iwe unongofanirwa kupa chinangwa chinokwanisika kuzadzisa zvinangwa zvaunoda. Kubva pane aya maonero, kune zvakawanda mabhenefiti ayo mabenchmarking anogona kuburitsa kubva ikozvino zvichienda mberi, sezvaunozoona.
1 Benchmarking: ndezvipi zvinangwa zvako zvikuru?
2 Natsiridza eCommerce yako nemaitiro ekumaka
3 Mimwe mipiro inopihwa nekumaka mabhenji
4 Mhedzisiro padhijitari yekutengesa
Benchmarking: ndezvipi zvinangwa zvako zvikuru?
Usati waita tsananguro dzekuti ungasimudzira sei eCommerce yako nehunyanzvi hwekumaka, zvinofanirwa kutsanangura mipiro yeiyi nyowani yebasa system. Unogona kunge uchitovaziva, asi zvechokwadi vamwe vanokushamisa kubva ikozvino, gadzira pepa nepenzura nekuti vanogona kukubatsira kubata bhizimusi rako redhijitari.
Ichi ndicho chimwe chezvinonyanya kutsvaga zvibodzwa kuburikidza nemabhenji. Mupfungwa yekuti makambani, anosanganisira edhijitari, anofananidza zvigadzirwa zvavo uye kushanda kwemaitiro ekutonga. Iwe unogona kuzadzikisa izvi kuburikidza nemuenzaniso wesangano.
Hapana mubvunzo kuti iwe uchafunga nezve mutengo wayo uye nemitengo inodiwa pakugadzira uye kutengesa kwayo. Ndokunge, iwe unozogona kushambadzira izvo zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvinogoneswa mune zvemagetsi zvekutengeserana zvauri kutungamira kana kubata mune zvirinani mamiriro.
Imwe yemhedzisiro yayo yakanangana ndeyekuti mukupedzisira zvigadzirwa zvako zvichave zvinobatsira zvakanyanya nekushandisa kweiri modhi yebasa. Kumira uchipesana nemakwikwi kuitira kuti nenzira iyi iratidzwe muhuwandu hwekutengesa kunoitwa kubva pakutanga kwayo.
Natsiridza eCommerce yako nemaitiro ekumaka
Kubva ikozvino zvichienda mberi iwe uchaenda kutarisa kuti ndeapi mhedzisiro ayo mabenchmarking anogona kuburitsa mukuvandudzika kwebhizinesi rako redhijitari. Kune akawanda kwazvo zvekuti isu tiri kuzongokupa iwe zvimwe zvakakosha zvakanyanya kuti iwe ugone kutarisa pavari nekuzvipira kwakakosha.
Benchmarking inogona kukubatsira kuti unzwisise makambani anokwikwidza zvirinani zvishoma kuti pfungwa yako mubhizinesi renyika ikure pamusoro pemakore. Iyo haifanire kunge iri panguva imwe chete, asi zvakakwana kuti zviitwe zvishoma nezvishoma kuitira kuti maitiro aya akwanise kuitwa nekuchengetedzeka uye kugona. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuziva kuti chero mhando uye yekuenzanisira kudzidza inoshanda segwara rekuvandudza maitiro aya mukutungamira kwechitoro chako chepamhepo.
Sarudza kuti ndezvipi zvinangwa zvaunoda kuzadzisa kubva zvino zvichienda uye kunyanya zvigadzirwa kana nzira dzaunoda kuongorora nekuenzanisa. Kune izvi zvichave zvakakosha kuti uve wakajeka nezve izvo iwe zvaunoda kuzadzikisa uye kwaunoda kuenda. Iwe unofanirwa kupa kuronga mubhizinesi redhijitari kuitira mabhenji kuti ubudirire pakupedzisira.
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofanira kutora izvozvi zvine chekuita nekumisikidzwa uye kuitwa kwenzira dzekuvandudza. Pasina kushandiswa kwechiyero ichi, mhedzisiro inogona kunge isingave inotarisirwa kubva pakutanga.
Kune rimwe divi, haufanire kukanganwa kuti kuburikidza nezvinozivikanwa sekumaka mabhenji iwe uri mumamiriro akakwana ekugadzirisa zvese zviwanikwa mukambani yako yepamhepo. Mune izvo zvinoita imwe yeakanakisa masystem ekuvandudza bhizinesi rako kubva pane ese maonero maonero.
Mimwe mipiro inopihwa nekumaka mabhenji
Uye hazvina kukodzera kuregeredza mimwe mhedzisiro inogadzirwa nekushandisa kweiri zano mune basa remakambani. Kwete chete mukutungamira kwavo, asiwo mune idzo idzo vashandi vanobatanidzwa. Semuenzaniso, iwo atinotsanangudza pazasi:
Simbisa mweya wechikwata. Izvi zvinodaro nekuti vashandi vanogona kunyatsonzwisisa mashandiro emukati maitiro uye vangangodaro vasina kukwanisa kuzviisa nemazvo. Mukupedzisira, mhedzisiro yakanangana iko kugadzirisa kunonzwisisika musangano remukati uye izvo zvinoreva kuti maitiro ese ekutengesa mune yako emagetsi commerce anonyanya kushanda kupfuura kusvika zvino.
Kuchinjana kwepfungwa. Hapana mubvunzo kuti kuenzanisa chimwe chezvinhu zvakanakisa zvekutsinhana kwemafungiro uye mhedzisiro yacho kuvandudza manejimendi. Iko mumwe nemumwe wevanhu vari chikamu cheichi chiitiko vape maonero avo pane izvo zvakanaka uye vape mazano matsva kana mazano ekuvandudza aripo. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuve uri munhu akavhurika uye unoda kuvandudza chirongwa ichi pamusoro pezvimwe zvekufunga nezvehunyanzvi. Iko kutsva kunokunda pamusoro pedzimwe tsika dzechinyakare munyika yebhizinesi redhijitari.
Resource optimization. Iko hakuna kwakaipisisa zano mune yedhijitari yekutengesa chikamu pane kusayedza kusimudzira manejimendi ezvigadzirwa zvako kana masevhisi. Iwe unofanirwa kutsvaga mhinduro dzakanakisa mune yega yega mamiriro uye izvi zvinoshanduka zvinoitika kakawanda nekushandisa chaiko kwekuyera.
Mhedzisiro padhijitari yekutengesa
Sezvaungave iwe uchinyatso kuziva panguva ino, kuenzanisa chiratidzo chekupokana nemakambani edhijitari pachawo anoenzanisa dzimwe dzenzvimbo dzawo. Usave nehanya neiyi nyaya. Hazvishamisi kuti ndeimwe yeavo ayo achakubatsira iwe kukura mukutengesa kana kuita kuti webhusaiti yako iwedzere kuoneka kune vashandisi. Kana iwe usinga nzwe panguva ino, unogona kuve uine matambudziko ne bhizinesi manejimendi manejimendi kubva zvino zvichienda mberi. Naizvozvo, inguva yakakodzera yekufananidza dzimwe dzenzvimbo dzako pabasa. Mushure mezvose, ndeimwe yemakiyi ayo anogona kukupa iwe kubudirira mune rako basa semadhijitari muzvinabhizimusi.
Chimwe chezvikumbiro zvakakosha ndechekuti chine chekuita nekuzivikanwa kwemamwe makambani. Ndokunge, iyi sisitimu yebasa inokutendera iwe kuve mune chinzvimbo chekuona izvo zvinhu uye hunhu hwemadhijitari madhijitari emakambani akabudirira ane yakakwira yekuwedzera chiyero
Chimwe chidzidzo chaunogona kudzidza chinoenderana nekuchiita kusvikira wasangana nezvinangwa zvakamisikidzwa mubhizinesi rako kana kuronga kwekutengesa. Ichi chinhu mukuita chinoreva kuti zvakanyatso kudikanwa kuti iwe uzviite nekuchenjera nguva dzose uyezve kuti ive inosanganisirwa mune yedu yakazara dhidhijitari yekushambadzira chirongwa, mune yepakati nepakati refu. Hazvibatsiri kuisimudzira kwemwedzi mishoma nekuti mhedzisiro yacho ichave isipo kune chero mhando yemazano.
Hapana mubvunzo kuti imwe yemhedzisiro yakajeka yauchacherekedza ndeyekuti bhizinesi rako repamhepo rinogara riripo. Chero chii chinoitika muchikamu chako, uine dzakateerana dzemipiro dzaunozoona mune ipfupi nzvimbo yenguva. Semuenzaniso, nezviito zvinotevera zvatinokufumura izvozvi:
Iko kutengesa kwezvako zvigadzirwa kana masevhisi anogamuchira zvinowedzera mukushambadzira kwavo.
Iyo yemhando yekutengesa yaunomiririra ichave iri nani inozivikanwa pakati pevashandisi kana vatengi uye nekudaro ichakubatsira iwe kupinda mukati rako repamhepo bhizinesi mutsetse.
Kuchave nekutaurirana kwakanyanya pakati pevashandi kana vabatsiri nekuda kwekuitwa kweiyi nyowani uye yazvino manejimendi system.
Pasina kupokana kuti kubva panguva ino uchave uchinyatsoziva kushaya simba, simba, mikana uye kutyisidzira. Kusvika padanho rekuti mikana mitsva uye inonakidza yebhizinesi ichavhura izvo kusvika parizvino zvisati zvaratidzwa.
Muchidimbu, chii Kubudikidza neiri basa system iwe unozogona wedzera kutengeswa kwezvigadzirwa zvako kana masevhisi kana kutopa kuoneka kukuru kune webhusaiti yako. Zvinogona kunge kuti pakupera kwezuva ndivo vauri kutsvaga pane imwe nguva muhupenyu hwako hwehunyanzvi. Kunyangwe mune chero zvazvingaitika, usakahadzika kuti iwe unowana zvemashiripiti mapikicha ekugadzirisa ako ehunyanzvi matambudziko. Nekuti pasina kupokana unenge wakanganisa muzvinangwa zvaunoteedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Maitiro ekusimudzira yako eCommerce nemaitiro ekufananidza?
Nzira yekushandisa sei kutaura ngano muCommerce?